इन्टरनेट स्पीडमा नेपालको अवस्था दयनीय तर पनि मूल्य बढाउने व्यवसायीको तयारी ! « GDP Nepal
इन्टरनेट स्पीडमा नेपालको अवस्था दयनीय तर पनि मूल्य बढाउने व्यवसायीको तयारी !
Published On : 21 December, 2018 9:06 am
काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा तिव्र गतिको इन्टरनेट चलाउने मुलुकमा नर्वे परेको छ भने नेपाल ११६ औं स्थानमा छ । सन् २०१८ मा सबैभन्दा तिव्र गति रहेको नर्वेमा इन्टरनेट स्पिड ६३.१९ एमबीपीएस छ भने नेपालको १६.६६ एमबीपीएस मात्रै छ ।
विश्वभर मोबाइल र फिक्स्ड इन्टरनेटको गति मापन गर्ने संस्था ओक्लाले यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेको आइसल्यान्डको स्पिड ५८.६८ एमबीपीएस, तेस्रोमा रहेको कतारको ५५.१७ एमबीपिएस र चौथोमा रहेको सिंगापुरको ५४.७१ एमबीपीएस छ ।
इन्टरनेटको विश्वव्यापी स्पिड १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालको भने सोही अनुपातमा बढेको छैन । मोबाइल इन्टरनेट स्पिडमा थोरैमात्र सुधार भएको तर फिक्स्ड नेटवर्कको अवस्था अघिल्लो वर्षकै जस्तो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार नभए पनि व्यवसायीले भने फेरि मूल्य बढाउने भएका छन् । गत साउनमा सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजी सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
आइस्पानले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार नै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । यसअघि गत साउन १० गते सरकारका प्रतिनिधि र आइस्पानका प्रतिनिधिबीच इन्टरनेटको मूल्य तत्काल नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार सरकारले सेवा प्रदायकलाई प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि विषय अघि नबढेकोले यही पुस १५ गतेदेखि सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय भएको आइस्पानले जनाएको छ ।